Ingiriis YOTEL ilaa Hotelka 3aad oo leh 451 Qolal | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul3 oo ka socda YOTEL British. Hotel Room 451 oo leh Madaarka
3 oo ka socda YOTEL British. Hotel Room 451 oo leh Madaarka
20 / 04 / 2018 34 Istanbul, tareenka, GUUD, TURKEY
Ingiriiska weyn ee YO! Company keentaa hoteelada brand YOTEL la Garoonka cusub ee Turkey. YOTEL waxay ka furi doontaa hoteel 3 oo leh 451 Airport.
Sida laga soo xigtay KERİM ÜLKER oo ka socota Dünya.com, shaqooyinka jireed ayaa kusii socda garoonka diyaaradaha ee 150, oo noqon doona kan ugu weyn adduunka oo leh awooda rakaabka 3 milyan oo rakaab ah, iyo hal-abuurka cusub ee adeegga ayaa bilaabay in la xaqiijiyo.
Midkoodna waa hoyga rakaab. Gaadiidka iyo dalxiiska, waa weyn ee Ingiriiska YO! Company keentaa hoteelada brand YOTEL la Garoonka cusub ee Turkey. Nooca cusub, oo la shaqeyn doona sumadda 'YOTEL', ayaa laga furi doonaa Gegida Diyaaradaha ee Istanbul 451 oo leh qolkiisa 3. CEO YOTEL Hubert VIRIOT, Turkey ayaa sidoo kale sheegay in uu geli doono hotel this. YOTEL sida ay macluumaadka ee ku yaal website VIRIOT ah, "Turkey iyo gaar ahaan horumarka Istanbul ee aan caadi ahayn dhaqaalaha iyo magaalooyinka, diinta iyo dhowrkii sano ee la soo dhaafay kaga tageen, waxaannu u marag furay caadada caan sii kordhaya," ayuu yiri.
YOTEL Istanbul waxay soo jiidataa dareenkeeda iyada oo la adeegsanayo qaabeynteeda smart. Dhinaca hawada ee hoteelka, oo ka koobnaan doona laba aag, waxay ka koobnaan doontaa qolal 102 ah. Dhinaca madow wuxuu dabooli doonaa qolka 349. Hoteelka ayaa sidoo kale yeelan doona shaqo wadaag iyo nasiino, xarumo fayoqab iyo aag fikradeed oo lagu ciyaaro Club Lounge.
Mid ka mid ah hudheelada ugu waa weyn garoonka diyaaradaha
Waxaa aasaasay ganacsade reer Ingiriis ah Simon Woodroffe, kasbashada hoteelka waa mid cajiib ah. Woodroffe, oo ah milkiilaha astaanta IFA Hotels, wuxuu abuuray sumadda 'Capsule Hotel' ee 2002 isagoo dhiirrigelinaya hudheellada kaabsoosha Japan ee uu ogaaday intii uu safrayay. Hoteelkii ugu caansanaa ee YOTEL ayaa laga furay London Gatwick kuna yaal 2007. YOTEL waax waxay ka furtay garoonka diyaaradaha Schiphol ee Amsterdam, caasimada Netherlands, waxayna ku faafay wadamo ay kamid yihiin France, Singapore iyo Mareykanka. YOTEL, oo ​​sidoo kale ku sugan garoomada diyaaradaha sida London Heathrow iyo Paris Charles De Gaulle, waxay ku guuleysteen Abaalmarinta Ganacsiga Sanadka ee Abaalmarinta Ganacsiga Dunida ee Ganacsiga. YOTEL Istanbul waxay noqon doontaa mid ka mid ah hudheelada ugu weyn garoonka diyaaradaha adduunka.
Isha: waxaan www.dunya.co
451 Qolka 3.Hazardan Geeddi-socodka EIA-da ee Hawl-galka EIA ayaa la bilaabay
Hotel 30 Boutique oo leh Xarunta Palandoken Ski
3 Hotel cusub oo laga dhisi doono gegada diyaaradaha ee magaalada Istanbul
Maanta Taariikhda: Sebtember 29, 1848 Nin Ingiriis ah oo la odhan jiray Pave ayaa ka socda Calais.
Maanta Taariikhda: Sebtember 29, 1848 Nin Ingiriis ah oo la odhan jiray Pave ayaa ka bilaabay Calais, Istanbul İstanbul
Maanta taariikhda: 29 September 1848 Laga soo bilaabo Ingiriis Calais magacaabay Pave ...
Goobta Arhız: 2014 hotel 11 gaari wado ilaa 9.
Hoteelka ayaa lagu dhisayaa baabuurta fiilooyinka
Barafku wuu raaxeeyaa wadayaasha hudheelada
Guddoomiyaha Baltas Spil National Park Laba Baabuur iyo Hotel Hotel (Sawir Sawir)
Hotel Erciyes 21 ayaa la dhisay
Haydarpasa Hotel Motel ma noqon doonto
Goorma ayaa ah Tareenka Soon ee Bursa
IMO Isbeddelka Isbeddelka Baasifoalka, Digniinta Gaadiidka iyo Dhul-galka